Ukujonga iBhodi yoKhenketho yaseAfrika enamalungu kumazwe angama-26 | Iindaba zeenqwelo moya
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeenqwelo moya » Ukujonga iBhodi yoKhenketho yaseAfrika enamalungu kumazwe angama-26
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba eBurundi • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zaseCameroon zokuhamba • Iindaba zokuhamba eChad • Iindaba zokuhamba zaseComoros • ECongo, kwiDemocratic Republic iindaba zokuhamba • ECongo, kwiRiphabhlikhi iindaba zokuhamba • I-Cote d'Ivoire yokuhamba kunye neendaba zokhenketho zabahambi kunye neengcali zokuhamba • Iindaba zokuhamba zaseJibouti • Iindaba zokuhamba zase-Egypt • Iindaba zase-Eritrea zokuhamba • Iindaba zase-Ethiopia zokuhamba • Iindaba zokuhamba eGabon • Iindaba zaseGambia zokuhamba • Iindaba zokuhamba eGhana • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Amathuba otyalo-mali • Iindaba zaseKenya zokuhamba • Iindaba zokuhamba eLesotho • LGBTQ • Iindaba zokuhamba eLiberia • Iindaba zokuhamba eLibya • Uhambo lweNdawo eNtofontofo • Iindaba zokuhamba zaseMali • Iindaba zaseMauritius zokuhamba • Iindaba zokuhamba zaseNiger • Iindaba zaseNigeria zokuhamba • Abantu benza iindaba • Iindaba zaseSenegal zokuhamba • Iindaba zaseSeychelles zokuhamba • Iindaba zeSierra Leone zokuhamba • Iindaba zokuhamba eSomalia • UMzantsi Afrika iindaba zokuhamba • Iindaba zaseSudan zokuhamba • Iindaba zaseSudan ngezohambo • Iindaba zaseTogo zokuhamba • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo • Iindaba zokuhamba eTunisia • Iindaba zaseUganda zokuhamba • Iindaba zaseZambia zokuhamba • Iindaba zohambo eZimbabwe
Ukujonga iBhodi yoKhenketho yaseAfrika enamalungu kumazwe angama-26
Ngamana 16, 2018
The IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika Lulwalamano lwasesidlangalaleni nolwabucala nomyalezo omnye oqinileyo. Lo myalezo kukuxelela ilizwe ukuba i-Afrika yoKhenketho iya isiba yindawo enye kwaye ivulekele amashishini. I-Afrika lilizwekazi elikhuselekileyo kwaye yamkela abakhenkethi, utyalomali, kunye nentsebenziswano ngezandla ezishushu. IBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ikwamkela iinkokheli zokhenketho ezivela kwi-Afrika iphela nakwihlabathi liphela ngezandla ezishushu zokuzisa ubunkokheli, ukuvelisa izinto ezintsha kunye namathuba otyalo-mali.
Iinkokeli zoKhenketho ziyaluva olu phulo lokuba iAfrika ikhule kunye. Ukushiya ezopolitiko ngasemva kunye nokutsala iinkokheli zokhenketho ukuba zijoyine eli qonga litsha lokunqanda ukuleqa. IBhodi yoKhenketho yase-Afrika imalunga nokwanda kweshishini, utyalo-mali kunye nokwazisa okuqinisekileyo kwilizwekazi elihlala lilibalekile.
Njengomnye wabaxhasi bokuqala kunye nelungu lokuseka, Iqela le-iFREE eHongKong yinkampani yehlabathi ebuvulindlela beendlela ezintsha zokuhlala zixhumekile kwihlabathi lohambo kunye nonxibelelwano lweselfowuni.
Ukusuka kwiminxeba yamanye amazwe kunye nezisombululo zokuzulazula kwedatha kunxibelelwano lweWi-Fi kunye neemveliso zohambo ezizodwa, iQela le-iFREE lizibekele iinjongo zokudiliza izithintelo kunye nokusondeza umhlaba kunye, kwaye ngokuqinisekileyo i-Afrika ikwi-ajenda yabo.
Isandula ukwenziwa IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika isekwe kwilinge lakutshanje elibekwe ngu Umanyano lwaMazwe ngaMazwe lwaBalingani bamaKhenketho (ICTP)
Imithombo yeendaba yokuhamba iyayithanda iAfrika kwaye iyabonisa. Ngenyanga enye intatheli kunye neempapasho ezivela kuzo zonke iimbombo zehlabathi zaba abahlobo bamajelo eendaba ixhasa iBhodi yoKhenketho yase-Afrika.
IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika inenyanga nje emfutshane ubudala kwaye ibeke umnxeba kumalungu okuseka. Ingxoxo esebenzayo iyaqhubeka. Kuphela namhlanje iBhodi yoKhenketho yase-Afrika sele yamkele amalungu amatsha ali-100 kwaye abaninzi banomdla wokuba ngoovulindlela kulo mbutho wase-Afrika, ngabantu baseAfrika ngenkxaso yehlabathi.
Ngokubambisana namalungu abucala nawoluntu, iBhodi yoKhenketho yase-Afrika (i-ATB) inyusa ukukhula okuzinzileyo, ixabiso, kunye nomgangatho wokuhamba nokhenketho ukusuka-ngaphakathi nangaphakathi e-Afrika.
Umbutho ubonelela ngobunkokeli kunye neengcebiso kumntu ngamnye nanjengokuhlangeneyo kwimibutho engamalungu.
Umbutho uyawandisa amathuba okuthengisa, onxibelelwano noluntu, utyalo-mali, uphawu lwentengiso, ukukhuthaza nokuseka iimarike zentengiso.
The Ukhuseleko lwe-ATB yezokhenketho kunye nesmiyumut eSierra Leone kwaye icwangciselwe amanye amazwe amathathu.
I-PR kunye neNtengiso, ukufikelela kwimithombo yeendaba
Ukuthatha inxaxheba kwezorhwebo
Amalungu ngoku abhalisiwe kula mazwe alandelayo:
I-ATB ikwinkqubo yokwazisa ngebhodi yokuqala yeeNkokheli zoKhenketho zase-Afrika kwaye ikwinkqubo yokudibanisa imisebenzi eqhubekayo ngamanye amaqabane oKhenketho e-Afrika phantsi kophahla olunye.
Ukukhangelwa kwe-CEO sele kuqalile kunye negama lophawu lokhenketho kuphendula.
Umbutho sele uvela kude isibhengezo sokuqala papashwa ngu eTurboNews Ngo-Apreli 6, 2018.
Ukukhangela kwamalungu aseka iBhodi yoKhenketho yase-Afrika kusaqhubeka.
Ukujoyina i-ATB kulula. Ndwendwela nje www.africantourismism.com kwaye ucofe ku Sijoyine njenge member.